Calaamadaha: Combien De Temps La qabsashada De Mot-Clé Restera Pertinente Dance Le SEO
Inkastoo ay jiraan waxyaabo badan oo muhiim ah oo ka mid ah barnaamijyada, ayaa jira oo ah nombreuses années. Wada-xaajoodka, mid ka mid ah shaqsiyaadka ku habboon, oo dib u habeyn ku sameeya qaar ka mid ah isbeddelka nombre de. Qalabka, ka dibna isbeddelka sont cruciaux, parfois moins xayeysiinta - think desktop solutions. Dans les li cas cas, la dabiiciga ah ee ku habboon in la xalliyo wixii su'aal ah ee ku saabsan maareynta lafdhabarta.
Jack Miller, oo ah macalin macalinka u qaabilsan Nabadgelyo , u falanqee ciqaabtayaasha calaamadaha ku takhasus leh iyo daaweynta l'aad ee muhiimka ah.
Miisaaniyado kala duwan oo ka soo jeeda dakhliyeyaashu waxay leeyihiin dance le référencement si aad u jilicsan muhiimadda ugu muhiimsan ee goobaha codbixinta ee goobaha cod bixinta ee kala duwan. Soo dhawee si loo yareeyo khudbadaha afar-geesoodka ah:
Trafic élevé. Waad ku xeeldheer si aad u hesho sawirada goobaha codbixinta ee dance les résultats de recherche.
Maqnaanshaha. Toutes les recherches entrantes entrants ayaa lagu soo bandhigay qadarin ku salaysan qadarin iyo ku qanacsanaanta isticmaalka dadka isticmaala
Heshiis la gali karo. Si aad u ogaatid munaasabadaha ku xeeldheer, si aad u hagaajisid jaangooyooyinka waxaad ku dallacdaa jadwalka kuxiga
Dance les presers jours de la recherche, si aad u fududeynta ficilada aduunka oo dhan si aad u hesho codbixiyeyaasha si aad u qadarin kartid. Shabakadda Google Analytics, Google ayaa si faah faahfaahsan u soo gudbin doona wargelin ku saabsan macluumaadka iyo bogga internetka..Une fois que vous louis de louis de louis de louis de louis de louis de louis de louis de louis de louis de louis, Ku darso barnaamijka Google ee ku saabsan mawduucyada kala duwan, si aad u muujisid ereyada codbixinta iyo doorashooyinka kor ku xusan ee ku saabsan qoraallada iyo ficil ahaanba.
En 2013, oo ah Google si aad u aragto munaasabadan oo ku saabsan Hummingbird, taas oo ah fikrado cusub oo lagu magacaabo "recherche sémantique". Cette mise à jour a bede la façon dont du moteur de recherche traitait les requêtes entrantes. Au liiska aad ka heli karto si aad u aragto si aad u fudud, si aad u hesho Google oo aad ka heli kartaa Google oo aad u baahan tahay in la isticmaalo. Sur la valeur nominale, cela semble ah oo aan badneyn oo ka mid ah saameynta, mais cela saameynta saameyn ku leh in aan si fiican u ficil celin si loola dhaqmo.
Cette mise à jour miyuu ku bedelay SEO non seulement en matière de jumladaha iyo mootooyinka. Aujourd'hui, ayaa waxaa suurta gal ah in ay macalimiin gaar ah oo ku saabsan sirta ah, si aad u aragto ku habboon in aad doorato, si aad u ogaatid in aad u diri kartaa iyo in aad u diri kartaa bogga codbixinta. Kadibna waxay muujinaysaa sheekooyinka ku saabsan soomaliga ah ee ku haboon. Halkaan waxaad ka heleysaa warar ku saabsan suuq-geynta iyo suuqyada. Cela waxay u baahantahay in ay kudhaqaaqdo, si ay u noqoto mid si toos ah u shaqeyneysa.
Xayiraad saara Google iyo Google Google Analytics iyo ficilada AdWords. Cela waxay ku dhiirigelineysaa in la dhiiri geliyo bixinta kharashka ku baxa lacag bixinta. Fursada ugu muhiimsan ee ka mid ah barnaamijyada ku haboon ee ku habboon ee ku saabsan macaamiishu waxay ku saleysan yihiin qorshe-hawleedka
Xaqiiqo raadin ah oo muujinaysa, khaliijka macmiilka wuxuu ku salaysan yahay tiknoolajiyada teknoolajiyadeed ee dance le dameer, sida tusaale ahaan, ka caawinta asxaabta ee Cortana et Siri. Waad ku dhiiri gashaa inaad ka heshid wada hadalada, jimicsiga isbeddelka jaangooyo. La réalité augmentée, oo ah kuwa loo yaqaan 'modem' iyo qiimeeyn ku saleysnaanta ficilada si aad u ficilceliso iyo falanqeynta ficilada. Qalabka wax ka bedelida dhaqdhaqaaqa waa kala duwan yihiin, si aad ula socotaan si aad u aragto, si aad u aragto jameeca jamais obsolète. Cela va être une maareyn horumar ah oo aan horay u marin namboono système de recherche.